'विदेशी पेन्सन थाप्नुभन्दा देशको नाम चम्काउनु ठीक' - संवाद - नेपाल
सात महिनाभित्र संसारका ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला सबै १४ वटा हिमाल चढेर दुर्लभ कीर्तिमान बनाउँदै छन्, म्याग्दीका निर्मल पुर्जा, ३४ । चीनको सीसापाङमा हिमालमा मात्रै उनको अदम्य साहसिक पाइला पुग्न बाँकी छ ।
छोटो समयमै सबै अग्ला हिमाल चढ्ने ऊर्जाको स्रोत के हो ?
मानवभित्र जे पनि गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ । आफ्नो सोचलाई खुम्चाइदियो भने हामीभित्रको क्षमता पनि खुम्चिँदो रहेछ । पहिले चन्द्रमामा मानिस जान्छ भन्दा कसैले पत्याउँदैनथे । मलाई पनि सात महिनामा यी हिमाल चढिसक्छु भन्दा कसैले मेरैअगाडि कसैले पछाडि सक्दैनस् भनेर उडाउँथे । तर मभित्र अदम्य इच्छाशक्ति थियो । त्यो इच्छाशक्ति नै मेरो ऊर्जा हो ।
इच्छाशक्ति जगाउने कारण ?
कुनै पनि काम निःस्वार्थ भावले गरिन्छ भने त्यसले ठूलो ऊर्जा दिन्छ । यो पाउँछु, त्यो पाउँछु भनेर होइन, मनले खाएको काम गर्दा इच्छाशक्ति खोई कताबाट पलाउँदो रहेछ ।
तपाईंको साहसबारे पर्वतारोहणका हस्तीहरु के भन्छन् ?
उनीहरु मेरो ठूलो फ्यान भएका छन् । म कतै रेस्टुराँमा छिरेको चाल पाए भने एकैछिनमा घेरिहाल्छन् ।
हिमाल आरोहणमा शेर्पा जाति विश्वमै चिनिन्छन् । तपाईंको काम देखेर शेर्पाहरू स्वयं चकित छैनन् ?
साँच्चै चकित छन् । मैले यस्तो गर्न सक्छु भनेर कसैले विश्वासै गरेका थिएनन् ।
बेलायती सैनिक सेवा छोडेर पर्वतारोहणमा लाग्ने मुड कसरी चल्यो ?
मैले सन् २०१२ मा पर्वतारोहण थालेँ । २०१७ मा सगरमाथा क्षेत्र पुग्दा बाटो बदल्ने सोच आयो । सगरमाथा चढ्नुअघि बाटो खोल्ने आइसफल डाक्टर टिममा गएको थिएँ । त्यस बेला आफ्नो काम देखेर आफैँप्रति ठूलो आत्मविश्वास पलायो । अनि मस्तले पेन्सन खाएर बस्ने समयमा मैले मुलुकको नाम चम्काउने बाटो रोजेँ ।
अग्ला हिमाल चढ्दा सबैभन्दा कठिन कहाँ भयो ?
पाकिस्तानको केटुमा निकै डर लाग्यो । खराब मौसमका कारण सबैले आरोहण त्यागिसकेका थिए । तर मेरो टिम एक्लै चढ्यो । बाटो खोलेपछि अरुले पनि चढे । कञ्चनजंघामा ८ हजार ४ सय ५० मिटरमा पुगेपछि तीन जना भारतीयलाई मिङ्मा डेभिड शेर्पा, गेसमान तामाङ र मैले आफ्नो अक्सिजन दिएर उद्दार गर्‍यौँ र हामी बिनाअक्सिजन चढ्यौँ । त्यसबेला निकै गाह्रो भएको थियो । तर कसैको ज्यान बचाउन अक्सिजन दिएकाले मनमा सन्तोष थियो ।
तपाईंको आरोहणमा सरकारी सहयोग छ कि छैन ?
चीन सरकारले सीसापाङमा आरोहणका लागि खुला गरेको छैन । हाम्रो सरकारले मेरो अभियानलाई देशको मिसनका रुपमा स्वीकारेर कूटनीतिक पहल गरिदियो । चीनले हामीलाई आरोहणका लागि अनुमति दिने मौखिक सहमति दिएको छ । तर परमिट पाएको छैन ।
सन् २०१४ मा म आमादब्लम हिमाल चढ्न गएको थिएँ । चार वर्षपछि त्यहाँ जाँदा तलदेखि पानी बोकेर लैजानुपर्‍यो । विश्व तापमान वृद्धिको असर मैले पहिलोपटक अनुभव गरेँ । यही विषयलाई सहयोग पुग्ने काम गर्छु ।
प्रकाशित: आश्विन ३०, २०७६
ट्याग: ८ प्रश्न